intengo yezinhlanzi zokudla zomshini wokudoba owengeziwe wezinhlanzi,inja,ukudla kwekati
Amandla:37KW + 1.1KW + 2.2KW izigaba ezintathu
wet wet wet extruder feed ezintantayo ifakwe nge-boiler enganikeza ngokuqhubekayo umusi oshisayo. extruder izinhlanzi ezintantayo kungakhiqiza zonke izinhlobo okuntantayo noma ukucwila kwe-aqua feed izinhlanzi, i-eel, imfanzi, udoti, loach, inkunzi, njll, futhi ikhiqize izinhlobo eziningi zokudla kwesilwane sekati, inja, nokunye. Ubungako be-pellet bungasukela ku-0.9-15mm ukondla izinhlanzi ezingafani. Isikhundla esiphakeme nemikhiqizo ephezulu yekhwalithi, Uhlobo lwe-Weting Sinking ne-Floating Fish Extruder ukukhetha okukhethiwe emafektri amakhulu noma amakhulu wokuphakelwa kokuphakelwa kokudla nepulazi lasemanzini.
Ukuphakama kwe-Wet Type Fish feed Extruder Conditioner
▶ Isikali somkhono sisebenzisa ukwakhiwa kwejezi, angafakwa ngaphakathi ngogwayi oshisayo noma ngamanzi apholile, ngakho-ke amazinga okushisa akhipha amandla angalawulwa kahle.
▶ I-conditioner ingenza ukuthi izinto zokwakha zibe ne-gelatinization ephelele yesitashi ngokuhlanganiswa kwesishisi esishisayo kanye nangomshini wokugunda / ukuxubana. Izinto zokwakha zingahlala endaweni yokubulala isikhashana isikhathi esingaphezu kwama-180s.
Izici zeFlantt Fish feed Pellet Extruder
1. I-pellet extruder yokudla okuntantayo ingakhiqiza amapherishi ezinhlanzi ezikhukhumalayo ezintantayo phezu kwamanzi ngaphandle kokuchithwa ngaphezulu 12 amahora; usayizi we-pellet wezinhlanzi ungasukela ku-0.9-15mm
2. Ukushisa okuphezulu kanye nenqubo yokucindezela okukhulu kungabulala i-salmonellosis kanye nokutheleleka kwamagciwane futhi kwenza ama-pellets ukuthi agaye kalula.
3. Kwenziwa umshini wokufudumeza kagesi ukuze kuthuthukiswe izinga lokuphakelwa kokuphakelwa namaphawu okuhamba kwesikhathi.
4. Izingxenye ezibalulekile zenziwa ngokusebenzisa ukwelashwa kokuqothula ngokunemba okuphezulu, ngaleyo ndlela ube nempilo ende yokusebenza.
5. Ukulungiswa okuhlukahlukene kwama-bollet bollet kungahle kuhambisane nezidingo ezikhiqiza amafomula ahlukile nezinto zokusetshenziswa.
6. Ukupheka okukodwa kwesikulufa esisodwa: onekhono lokukhiqiza eliphezulu; isivinini esiguqukayo
7. Shintsha isikhunta esihlukile ukwenza ama-pellets ngamadayimitha ahlukile.
Ukusebenza kwesisekelo seFlash Fish Extruder
Inhliziyo yomshini we-feed pellet extruder osebenzayo uyasebenza: ukuhlela, ukupheka nokufa ngokushintshana. Ngama-boiler ngokuqhubekayo anikeza umusi oshisayo ku-conditioner, izinto zokwakha zingaphekwa ngokuphelele futhi nenani lokudla okunempilo lithuthukiswa. Inqubo yokupheka ingadala izinga eliphezulu le-gelatinization yama-starches, kuphumela ekunikezelweni ngokuqina okuhle kwamanzi. I-extruder yokuphakelwa kwezinhlanzi isigaxa eside esine-screw auger ngaphakathi eyenzelwe ngokukhethekile ukufaka ingxube yokuphakelwa ukushisa okuphezulu nomfutho we-steam. Lapho okuphakelayo kuphuma kufa ekugcineni komgqomo, kuboshwe umusi uvunguza ngokushesha okukhulu, ama-pellets afudumele afudumele ayanda, kukhiqizwe iphansi elincane elintantayo lentantayo. Ngemuva kwalokho idivaysi yokusika izosika ama-pellets enziwe ngobude obuhlukile njengoba kudingeka. Isikhupheli sisebenza ngezindlela eziningi, futhi ingenza okuphakelayo ngezimpawu eziningi ezahlukahlukene.
Ukusetshenziswa Okubanzi kwe-Pellet Extruder Yezinhlanzi Eziyantantayo
1. Umshini wokuphanda izinhlanzi we-pellet extruder ungakhiqiza izinhlanzi zokudla ezinhlanzi, i-eel, imfanzi, udoti, loach, inkunzi, njll, futhi ikhiqize izinhlobo eziningi zokudla kwesilwane sekati, inja, nokunye.
2. i-feed pellet extruder isetshenziswa ikakhulu efektri yokuphakelwa kokuphakelwa kosayizi omkhulu noma omkhulu nepulazi lasemanzini.
3. Izinto zokusetshenziswa zingaba ukolweni, ubhontshisi, ikhekhe nokunye okusele njll. Umgomo wayo womsebenzi oyinhloko uguqula amandla emishini abe amandla okushisa ukuze akhiphe impahla.
Idatha Yobuchwepheshe Ye-Pellet Extruder Yokudla Okuphonsayo Kwezinhlanzi